Bilie nke Vine | Martech Zone
Sọnde, Febụwarị 16, 2014 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
vine ulo oru a afọ gara aga na nwere nnọọ a bit nke ọma. Chee maka Vine dika vidio nke Twitter, ebe ị na-edekọ obere vidiyo nke vidiyo ma bulite ha. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na Twitter zụtara Vine ma jikọta egwu na vidiyo si na Twitter na ebe ahụ ngwa. Mgbe ị na-eji ngwa ahụ, igwefoto na-edekọ naanị mgbe enyo ihuenyo ahụ na-emetụ, na-enye gị ohere ịme vidiyo dị egwu.
Nke a bụ ihe atụ nke etu ndị ahịa si eji Vine eme ihe:
Yana infographic, Tamba dere ederede na gịnị mere uto nke Vine kwesịrị ịmasị ndị ahịa. Ha gụnyere ihe na-atọ ụtọ - dị ka Unrulymedia si kwuo, Vines ndị nwere akara nwere ike ịkekọrịta okpukpu anọ karịa vidiyo vidiyo mgbe niile. Bụ gị ika na Vine ma?
Tags: marketingVidio Ahịaahịa vaịnosisi vaịn twitter
CoSchedule: Editorial na Social Publishing Kalinda maka WordPress
Fresh URL: Hichaa URL gị maka ringkekọrịta
Feb 17, 2014 n’elekere 3:48 nke abali
Naanị isi elu: Ederede ederedeghị nke ọma. Enweghị oghere n'etiti okwu.